शीर्ष नेताहरू को कहाँबाट उम्मेदवार ? - samayapost.com
समयपोष्ट २०७४ असोज २२ गते ३:३४
देउवा डडेल्धुराबाट सिफारिस
नेता पौडेल तनहुँ १ बाट सिफारिस भएका छन्, तर सर्वसम्मत हुन सकेनन् । सो क्षेत्रबाट गोविन्दराज जोशी, शंकर भण्डारी, गोविन्द भट्टराई र रामचन्द्र पोखरेल सिफारिस भएका छन् । क्षेत्र नं. २ बाट प्रदीप पौडेल, ध्रुव वाग्ले, पुष्पराज पराजुली, जितप्रकाश आले सिफारिस भएका छन् ।
नवलपरासी–१ बाट लड्दै आएका महामन्त्री डा. शशांक यसपटक क्षेत्र नं. २ बाट लड्दै छन् । तर, जिल्लाबाट सिफारिस आएको छैन । कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, नेता विमलेन्द्र निधिसहितका नेताको सिफारिस आउन बाँकी छ ।
उपमहासचिव घनश्याम भुसाल रूपन्देही १ र ३ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस भएका छन् । उनले क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेदवारी दिने मनस्थिति बनाएका छन् । तर, उनको सिफारिस सर्वसम्मत हुन सकेन ।
उपमहासचिव विष्णु पौडेल रूपन्देही–२ बाट सर्वसम्मत सिफारिस भएका छन् । यसअघि तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई पौडेलले सोही क्षेत्रबाट पराजित गरेका थिए ।
नेता लालबाबु पाण्डित मोरङ–६ बाट उम्मेदर सिफारिस भएका छन् । उनी सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।
युवा नेताहरू रवीन्द्र अधिकारी कास्की–२, डा. राजन भट्टराई काठमाडौं–४, राजेन्द्र राई भोजपुर–१, महेश बस्नेत भक्तपुर २, खिमलाल भट्टराई रुपन्देही–५, ठाकुर गैरे पाल्पा–२, गोकुल बाँस्कोटा काभ्रे–२, सुरेन्द्र मानन्धर काठमाडौं–१०, रामकुमारी झाँक्री गुल्मीबाट प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिकमा सिफारिस भएका छन् ।